Ama-Capes ezinja, ukufudumala akunakwenzeka | Izinja World
Nathi Cerezo | 15/11/2021 12:29 | Izesekeli zezinja
Izinja zezinja ziyingubo ewusizo kakhulu ezinyangeni ezibandayo, ikakhulukazi uma lina noma likhithika, nakuba kukhona ngempela okuthile kukho konke ukunambitheka (abantu nezinja): ama-raincoats, njengejazi ngisho nezingubo zokugqoka.
Kulesi sihloko Sizokutshela mayelana nama-capes angcono kakhulu wezinja futhi, ngaphezu kwalokho, sizokutshela izinhlobo zayo ezahlukene, indlela yokujwayela izinja izingubo futhi uma kuhle ukuzifihla. Siphinde sincome lesi esinye isihloko kusuka izingubo zezinja ezincane: amajazi afudumele nama-jumpers!
Ijazi Lenja le-Oslueidy ...
Ijazi le-Idepet Waterproof ...
Izingubo zezinja ze-Fossrn ...
I-Peppo nezilwane ezifuywayo -100 ...
Ijazi Lenja ...
JoyDaog - Abesifazane ...
1 Ijazi elingcono kakhulu lezinja
1.1 Ijakhethi yaseKapa
1.2 ICape izinja zikanokusho
1.3 I-raincoat ene-hooded ekhanyayo
1.4 Santa Claus eKapa
1.5 Ijazi le-cape eliphrintiwe le-Tartan
1.7 Imvunulo yomthakathi ene-capita
2 Izinhlobo zesendlalelo nemisebenzi
2.1 Izendlalelo njengejazi
2.2 Izendlalelo njengemvunulo
3 Ngingakwazi ukugqokisa inja yami?
4 Indlela yokujwayela izinja ukugqoka izingubo
5 Ungathenga kuphi ama-capes wezinja
Ijazi elingcono kakhulu lezinja
I-Idepet Dog Coat ...
Leli jakhethi yohlobo lwe-cape elinethezekile likhululekile ukuligqokwa nokulikhumula njengoba kufanele lilungiswe kuphela kusukela ngaphambili. Ingxenye emaphakathi iqondana nomhlane wenja njengoba inebhande elinwebekayo, eliphinde livimbele ukuthi linganyakazi. Yenziwe ngekotini, ifudumele kakhulu futhi i-fluffy futhi, ngaphezu kwalokho, itholakala ngemibala eminingi (epinki, ephuzi, empunga neluhlaza okwesibhakabhaka) nobukhulu obuhlukahlukene. Iphinde ibe nembobo encane ngemuva ukuze ukwazi ukufaka ibhande.
Njengephuzu elibi, abanye abasebenzisi bakhala ngokuthi usayizi mncaneNgakho-ke, uma unquma ukuyithenga, qiniseka ukuthi uyilinganise kahle inja yakho.
ICape izinja zikanokusho
I-Bwiv Dog Coat ...
Leli jazi le-cape aligcini nje ngokuthambile, lifudumele kakhulu futhi kulula kakhulu ukuligqoka (livuleka ngokuphelele futhi lilungise nge-velcro), futhi inomklamo omane nje omuhle. Itholakala ngemibala eminingana, nakuba okumpunga kuyiyona egqoka kakhulu, futhi ilungele izinja ezinosayizi omkhulu. Ijazi libuye libe nemininingwane embalwa elenza libe lihle nakakhulu: ikhola ejikijelwe phansi evikela inja emakhazeni kanye nebhande lenjoloba ngaphansi ukuze lifake umsila ukuze indwangu inganyakazi futhi izwakale inkulu.
I-raincoat ene-hooded ekhanyayo
I-Dociote Waterproof ye ...
Phakathi kwama-capes ezinja, ama-raincoats ngokuqinisekile awusizo kakhulu. Le modeli iwuhlobo lwe-cape ngoba ineziketi, ezingavimbeli ukunyakaza kwenja yethu. Iqukethe eminye imininingwane ethakazelisayo, njenge-hood enengxenye engaphezulu ekhanyayo ukuze ingasusi ukubonakala, i-reflesive strip kanye ne-slit ngemuva, evikelwe nge-velcro, ukuvumela ukuthi ibhande lidlule. Futhi, kunjalo, alingeni nhlobo amanzi.
Santa Claus eKapa
I-Fontee® Puppy Christmas ...
UKhisimusi uyeza futhi ungase ufune ukucela inja yakho ukufanisa imvelo. Uma evuma (khumbula ukuthi akufanele umphoqe noma yikuphi ukuthi agqoke noma yini angayifuni) leli khepi elibomvu elinesigqoko esihambisanayo liyi-cutie yangempela. Ilungiswa nge-velcro futhi ikhululekile kakhulu futhi ifudumele, ngaphezu kwalokho, ngeke ivimbele ukunyakaza kwakho.
Ijazi le-cape eliphrintiwe le-Tartan
Ijazi le-Muddy Paws le ...
Zimbalwa izinto ezisesitayeleni kune-tartan yaseScotland, iphethini engasoze yaphuma esitayeleni futhi engabukeki nje iyinhle kubantu., nasezinjeni. Ngale modeli ephelele ye-Westy, inja yakho ingahamba uhambo olufudumele. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukuyifaka, ngoba ihambisana kuphela ngaphambili nezinkinobho ezimbalwa (awudingi ngisho nokubeka imilenze noma kuphi) kanye nebhande phakathi.
Ijazi lenja, ...
Le raincoat yohlobo lwe-poncho kulula kakhulu ukuyifaka, ngoba kufanele ufake ikhanda lesilwane entanyeni. Kamuva, ungalungisa ibhande nge-velcro kanye nebhande ukuze ingubo inganyakazi kakhulu, kanye nezintambo ezimbili ezingemuva ezinwebekayo.. Ngaphezu kokuphrinta okufihlakele kanye nokunethezeka kwayo, i-raincoat igqama ngokuba nomcu ocwebezelayo ukuze ithole inja yakho ngokushesha uma kukhanya kancane. Ekugcineni, lo mkhiqizo utholakala ngemibala emibili namasayizi amaningana.
Imvunulo yomthakathi ene-capita
Siqede ngemvunulo epholile kakhulu nephelele ye-Halloween (nakuba singakhathali ukugcizelela ukuthi, uma inja yakho ingathandi ukugqoka izingubo, ungayiphoqi). Iqukethe izingxenye ezimbili: i-lilac cape yezinto ezicwebezelayo, ezifana ne-satin elingana ngaphambili naphakathi nesigqoko esincane esithandekayo esinama-curls aphuma kuso. Alinakho okukhethekile okukhethekile ngaphandle kokuthi lithandeka ngokuphelele!
Izinhlobo zesendlalelo nemisebenzi
Amakapa ezinja bangaphansi kwezigaba ezimbili ezibanzi, kuye ngenjongo yokugcina izilwane ezifuywayo zifudumele noma zomile noma ziyimvunulo.
Njengejazi, ama-capes ezinja umqondo omuhle kakhulu njengoba kulula kakhulu ukuwafaka. Ngokuvamile ahlanganisa ingxenye engaphambili lapho kufakwa khona imilenze yangaphambili futhi ingxenye, ibheke phakathi nesiqephu, ibambe ukhalo ukuze ingubo ingandizi. Okuhle ngalesi simiso akukhona nje ukuthi kukhululekile kakhulu ukugqoka nokukhipha, kodwa futhi ukuthi kuhlanganisa ingxenye enkulu yenja ngaphandle kokwenza ubunzima ukunyakaza kwayo.
Olunye uhlobo olukhulu lwama-capes yilawo asetshenziswa njengezinto zokufihla. Kungakhathaliseki ukuthi njengezingubo ezithandekayo ongazigqoka ngoKhisimusi noma ukugqoka i-Halloween noma i-Carnival, ama-capes angavumela inja yakho ukuba ibe i-vampire, isangoma, isangoma ... Nokho, ngokuba inketho yobuhle, le nketho iphakamisa inkinga yokuziphatha, njengoba sizobona ngezansi.
Ngingakwazi ukugqokisa inja yami?
Akungabazeki ukuthi izinja zinhle kakhulu uma zivunule, nakuba kuwumsebenzi owenzelwe ukuzijabulisa kwabantu kuphela kuphakamisa izingqinamba ezithile. Ngenxa yezizathu zokuxhumana, inja yethu ayikwazi ukusitshela ukuthi "khumula le sweatshi ukuthi ngibukeka njenge-tonneau", ngakho-ke, ingazi umbono wayo, futhi ingenawo umsebenzi ongokoqobo (kuhlukile uma kuziwa ezembathweni zokugwema amakhaza, umoya noma imvula, njengoba benakekela inhlalakahle yabo), ukuwagqokisa imvunulo akuwona umqondo omuhle kakhulu.
Uma uzowagqokisa imvunulo, nakuba kungekho okuvimbile, khumbula okungenani okulandelayo:
Thola imvunulo ekusebenzelayo ntofontofo, kulula ukuyigqoka futhi uyikhumule, futhi ayikuvimbeli ukunyakaza kwakho. Futhi, zama ukuthola usayizi olungile futhi ungacindezeli kakhulu.
Sesha eyodwa Indwangu engalunywa futhi uma kungenzeka ukukhanya.
Y ngaphezu kwakho konke, ungakuphoqi. Uma ubona ukuthi akakhululekile, susa imvunulo ngokushesha. Ukungakhululeki akuboniswa kuphela ngokuzama ukususa imvunulo, kungase kubonakale uma ekhotha kakhulu, ezamula noma ema kakhulu.
Mayelana nezimonyo, ungalinge usebenzise noma yimuphi umkhiqizo owenzelwe abantu enjeni noma kwesinye isilwane. Lokhu akuhloselwe bona futhi kungabangela ukushisa nokungakhululeki.
Indlela yokujwayela izinja ukugqoka izingubo
Uma ufuna ukujwayela inja yakho gqoka izingubo ngoba uhlala endaweni ebanda kakhulu noma enemvula, Qaphela ukuthi:
Ezinye izinhlobo sezilungele umkhuhlane, ozazisa ngalo kahle ngaphambi kokuthenga ijazi lesilwane sakho. Isibonelo, izinja ezincane kunazo zonke yizo ezivame ukwazisa ijazi elifudumele kakhulu.
Sesha eyodwa Ijazi lenja elikhululekile. Kungakhathaliseki ukuthi ijazi lemvula noma ijazi, hlola ukuthi umklamo uvumelana nezidingo zenja, ukuthi awuvimbeli ukunyakaza kwayo nokuthi usayizi oyifanele kangcono, awumkhulu kakhulu noma omncane kakhulu.
Ungaligqoki kuphela uma uphuma. Zijwayeze kancane kancane ukuyibeka isikhashana usekhaya. Yebo, ungalokothi umvumele alale naye noma alahlekelwe umbono wakhe ukuze angesabi.
Ungathenga kuphi ama-capes wezinja
Ungathola zonke izinhlobo zezingubo zezinjaHhayi nje izendlalelo, ezindaweni eziningi ezahlukene, kusukela ezitolo ezijwayelekile kuya ezindaweni ezikhethekile. Ngokwesibonelo:
En Amazon Uzothola inani elikhulu lezendlalelo ezihlukene zazo zonke izinhlobo, kungakhathaliseki ukuthi ama-raincoat, amajazi noma izingubo zokugqoka. Vele, qaphela ukuphawula njengoba kwesinye isikhathi ikhwalithi ihlupheka kancane. Okuhle, nokho, ukuthi ungaba nayo ekhaya ezinsukwini ezimbalwa nokuthi maningi amamodeli.
En izitolo ezikhethekile njenge-TiendaAnimal noma i-Kiwoko ungathola nezingubo ezifudumele zenja yakho. Amasayithi angagcini nje ngokuba nemikhiqizo yekhwalithi ephezulu, kodwa ungaya nasezinguqulweni zawo zomzimba ukuze uhlole ukuthi yilokho okufunayo.
Ekugcineni, enye inketho ethokozisayo yizindawo ezinjengalezi Etsy, lapho ungathola khona izingubo ezenziwe ngezandla eziklanyelwe lezi zilwane ngokukhethekile. Kunjalo, ngokuba into eqondene nawe ngokuphelele futhi eyenziwe ngezandla, banenani eliphakeme kakhulu kunezinye izinketho.
Sithemba ukuthi sikusizile ukuthi uthole, phakathi kwale nqwaba yamakepisi ezinja, leyo esifanela kangcono isilwane sakho. Sitshele, ingabe inja yakho iwagqoka kahle amakepisi? Wajwayela kanjani? Yini ekufanele kakhulu ebusika?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ama-Capes ezinja, ukufudumala akunakwenzeka